Khudbadii uu maanta Madaxweynuhu ka akhriyey Fagaaraha Xuska 18-MAY Oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa halkan ka akhriso + Sawiro | Warsugan News
Home Wararka Khudbadii uu maanta Madaxweynuhu ka akhriyey Fagaaraha Xuska 18-MAY Oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa halkan ka akhriso + Sawiro
Khudbadii uu maanta Madaxweynuhu ka akhriyey Fagaaraha Xuska 18-MAY Oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa halkan ka akhriso + Sawiro
May 18, 2016Wararka
Khudbadii Mdaxweynaha ee 25 Guurada ka soo wareegtay Madax-banaanida Qaranka Somaliland oo Rubuc Qarni ay ka soo wareegtay, Madaxweynuhu uu nasiib u yeeshay kuna soo beegan tay Xuskani Wakhti uu madaxweynuhu ka tanaasulay tartankii Murashaxnimada ee Shanta Sanno ee Danbe, taasoo qaranka guul iyo ku dayosho u noqotay ka dib Hal Teeram oo Madaxweyne Afrikan ahi uu kaga tegay Qarankiisa Haybad iyo karaamo isagoo la jecel yahay, fursadna u haysta inuu dalkiisa hogaamiyo labada doorasho oo kale, haseyeeshe uu ka doorbiday, go;aankaa geesinimada leh
Khudbadii uu maanta Madaxweynuhu ka akhriyey Fagaaraha Xuska 18-MAY Oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa halkan ka akhriso.
Bismilaahi Raxmaani Raxiim,,,
Ugu horeyn, waxaan hambalyo iyo boggaadin balaadhan hawada u marinayaa dhammaan Shacbi-weynaha Somaliland meel ay joogaanba Xuska 25 Guurada Munaasibadda Qarannimada Somaliland ee 18-ka May.
•	Waxaynu yagleelnay qaran taabo-gal ah, oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dawladnimo.
•	Waxaynu tirtirnay keli-talisnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taagleynta.
•	Waxaynu meel-marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo ay inagaga dayan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay.
•	Waxaynu xaqiijinay in aynu khilaafka dhexdeena ku xalinno xigmad siyaasadeed iyo xeer-beegtinimo salka ku haysa dhaqankeena soo-jireenka ah, iyadoo aanay cidina gacan ka geysan ama la ina dhexgelin, taas oo muujinaysa bisaylka Bulshada Somaliland.
•	Waxaynu ku tallaabsanay horumar mug iyo miisaan leh oo wax-weyn ka bedelay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, kaabayaasha dhaqaale iyo hantida gaarka loo leeyahay.
•	Haddii Soomaliyi wada noolaan kari weyday, wuxuu caqliga fayoobi ina farayaa inay iskeed u kala noolaato.
•	Haddii wax la wadaagi kari waayo, waxa furan in wax la kala yeesho.
•	Waxaan ugu baaqayaa Beesha Caalamka, gaar ahaan Dalalka Midawga Yurub, Maraykanka, Midawga Afrika, Jaamacadda Carabta, Dawladaha IGAD in ay garwaaqsadaan qadiyada iyo xaqa aayo-ka-tashiga Shacbiga Somaliland, isla markaana aqoonsadaan qarannimadooda.
•	Waxaan xog-ogaal ka ahay in qaar ka mid ah madax-dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Gobolka Sool iyo Sanaag Bari ay ku jirto tabasho iyo saluug. Somaliland waxay ku soo caano-maashay in khilaafka dhexdooda yimaadda ay ku dhamaystaan wada-hadal, is-qancin iyo isu-tanaasul.
Waxaan aaminsanahay in wada-hadalku yahay dariiqa keliya ee lagu xalin karo turxaanta dhexdeenna taal.
•	Shacbi-weynaha Somaliland waxaan ugu baaqayaa:
	In ay meel uga soo wada-jeestaan ilaalinta qarannimadooda, adkaynta nabadda iyo deganaanshaha dalkooda.
	In ay u midoobaan maslaxadda iyo danaha guud ee dalka.
	In ay meel uga soo wada jeestaan horumarka iyo dhismaha dalka.
	In ay si mug leh uga qayb-qaataan Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha iyo Doorashooyinka dhici doona 27-ka bisha March 2017-ka.
Wa Billaahi Taqwfiiq…
Previous PostDaawo Sidaas darteed Dadka iyo Dalka Aan Odayga u ahay Idiinma soo socdaan oo way tashadeen ee Duca qabaya Next PostDaawo Sawiro Ka turjumaya Qadiyada Somaliland iyo Da’a yarta ku dhaqan Gobolada oo muujiyey shucuur aan hore loo arag Sanadkan oo Qaranku Rubuc qarni Madaxa Ka jaray ka 18-MAY-1991-2016